Kutumira sexting - Inotyisa pakati pevechiri kuyaruka
Kutumira sexting - ngozi ine ngozi | Zvepabonde nekujekesa
Kutumira sexting kunogona kutyisa kune avo vanobatwa
Kupedzisa kugumisa - usatora sexting!
Izwi rokuti sexting rinoumbwa nemashoko ekurara uye kutumira mameseji maererano uye zvinosanganisira kuparadzirwa kwezvinhu zvakashata kuburikidza neNesapp kana kuti mitambo yevanhu vanoita sepa Facebook. Mupfungwa yakazara, kutumira mameseji efoni kunosanganisirawo kuisa uye kugoverana mifananidzo muzvinhu zvinokanganisika uye pamwe nhengo dzega.
Uyu hutano hwevechidiki iye zvino hunoonekwa seine mubvunzo zvikuru, sezvo avo vanotumirwa kana kuiswa mafirimu kazhinji vanowira mumaoko asina kunaka.
Kwete kazhinji, mifananidzo yakatarwa neshamwari kana mumwe munhu upi zvake anopedzisira ari pazvivara zvepabonde, izvo zvinoshandiswa nevatapi vasina kubvumirana.
Chaizvoizvo, chero ipi zvayo yakatumira shoko nehukama hwepedyo ingozi, nokuti inokanganisa kubva panguva ino yakawanda isisina simba uye haisisina simba pamusoro pekugona kudzoka zvakare.
Sei kutumira mameseji kunonyanya kufarirwa pakati pevechiduku?
Kunyanya vechidiki mukuyaruka vanowanzoda kuratidza chimwe chinhu kune vamwe vezera rako. Kakawanda, zvinyorwa zvekushushikana zvino zvinotumirwa pakati pevamwe shamwari kuratidzira kunaka kwe miviri yavo nekuvarumbidza.
Nenzira iyi, vechidiki vanoita kuti vawedzere kuzviremekedza uye saka vanobatsirwa nekutumira sexting. Mukuwedzera, kutumira zvido zvisina kufanira kunoshandiswa kunyanya muhukama kuratidzira mudiwa wake rudo uye zvekuita zvepabonde.
Zvechokwadi, kutumira mameseji ekutengesa kunokonzera dzimwe ngozi kune vashandisi, sezvo izvi zviri kunyanya vechiduku. Sezvaunoziva, hukama hunogara kwenguva yakareba panguva ino uye hunogona kushandiswa neimwe sangano kumanikidzira kune imwe. Muchirevo ichi, kushandiswa kwemafoto kunowanzotyisidzirwa, kunyanya pamasangano evanhu vanoita sewe Facebook kana Twitter.
Mhedziso - tarisa, paunozarura chimwe chinhu pamusoro pako!
Asi kunyange zvisingazivikanwi zvinogona kuuya kutumira zviri mukati, kana shoko reAsapp, somuenzaniso, rakangotumirwa kune vanhu vanoverengeka. Mukuwedzera, kugamuchira zvifananidzo zvinowanzochengetwa zviri nyore, izvo zvinogona kutungamirira kumamiriro anonyadzisa paanoratidza maitiro ake kuratidzira mifananidzo yakajeka yevanhu vatatu.
Kuve nemifananidzo yakasvibiswa yevanhu vari pasi pepakati naizvozvo inotyisa, sezvo izvi zvingave zvingaonekwa sechiitiko chekuona zvinonyadzisira zvevana.
Iwe unogona kuzvidzivirira sei semupiki kana mutumiri wepamusoro pengozi pazvinokwanisika?
Sezvo mutumisi asati atumira zvinyorwa zvekutengesa zvinowedzera kutonga. Iwe unofanirwa kutarisa mutsara wemubatsiri kaviri uye nyatsoteerera kumisasa yefoni.
Somuenzaniso, kana uine mifananidzo kune Facebook, vateereri vanogona kutsanangurwa. Mukuwedzera, hukama hunofanira kunge husingarevi chiso kana humwe hunokosha, kuitira kuti irege kukuvadzwa mukuparidzirwa sechirwere. Kana munhu akagamuchira paSexting nude mifananidzo, munhu anofanira kubvisa mufananidzo pasinei nechave chave chiripo zvinoyevedza pakarepo.
Nechiyero ichi mumwe haasati aine (mwana) zvinonyadzisira zvehuwandu uye naizvozvo zviri pachena kune rumwe rutivi rwakachengeteka. Mukuwedzera, dambudziko rekushandurwa kusingadikanwi kana ukasashandiswa zvisina kunaka kwe smartphone kuburikidza neshamwari kana kurasikirwa.
Kutumira sexting kunoshandiswa zvisingaverengeki nevechidiki vakawanda, izvo zvinowedzera dambudziko rekuparadzirwa kusingadiwi. Zvechokwadi, sewechiri kuyaruka, iwe unowanzokanganiswa neshamwari saka saka tumira zvidhori zvakakomba kubva kune vezera rako.
Kunyange zvakadaro, hapana angada kuonekwa pawebsite yezvinonyadzisira pasina kubvumirwa kwake uye saka anogona kunge asina kupfeka pamberi pemamiriyoni evanhu.
Nokudaro, zvinokosha kuti zvisanyanya kucherechedza ngozi dzekutumira mameseji uye kutora matanho akaenzana. Iwe unofanirwa kuteerera nguva dzose kune waunotumira mapikicha uye kana iwe zvisina kukanganisa nekuda kwekugadzirisa kweSikonifoni zvinongorongedza nhare dzose sevatambira. Kunyatsokurudzirwa ndiko kutumirwa kwezvinhu zvakashata zvinokuita kuti urege kuzivikanwa uye kwete chiso kana zvimwe zvinowanikwa.
Pakuguma, pane nguva dzose kutyisidzira, saka iwe unofanira kufungisisa zvido zvekuita kwechidiki.